Tricks On Sida Loo Dhaafo Spam u Gudbinta Google Analytics - Talobixin kooban
Muddo labo sano ah, bogga spam ee loo soo gudbiyo bogga ayaa ah dhibaato weyn. Waraaqaha loo gudbiyo spammy ayaa laga yaabaa inay kaa fekeraan in ay jiraan booqashooyin badan oo badan oo ku jira xisaabta Google Analytics sababtoo ah korodhka taraafikada gudbinta iyo warbixinno aad u xun.
Spam u gudbinta sida darrada, badhamada bogga, iyo wadaagyada sahlan ee fudud ayaa ka mid ah qalabka raadiyaha qalab dejinta oo khatar gelinayey hawlaha internetka e-commerce. Google Analytics waa mid ka mid ah qalabka lagama maarmaanka ah ee ka caawiya shirkadaha ganacsatada iyo ganacsatada e-ganacsiga in ay falanqeeyaan oo ay la socdaan wadada ay raacayaan martidooda - used tractor values nada.
Waa kuwan yar yar ee lagu sharxay Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , kaas oo kaa caawin doona inaad joojiso spam gudbinta gudbinta saamaynta hawlaha website-kaaga
Isticmaalida faylka .htaccess File
Xakameynta taraafikada gudbinta spam waxaa si wax ku ool ah loo marsiinayaa .htaccess. Faylka qaabeynta waxaa loo isticmaalaa si loo maamulo serverkaaga. Habkani wuxuu ka hortagayaa boggaaga inuu ka badan yahay iyo sidoo kale xayiraadaha xayeysiinta ee bogaggaaga. Xakamaynta gudbinta spam iyada oo loo marayo .htaccess waa mid aad waxtar u leh tan iyo faylka la tilmaami karo si loo xakameeyo booqashooyinka spammy ee cinwaan ama IP-ga.
Qaar badan oo ka mid ah faa'iidooyinka suuq-geynta iyo mulkiilayaasha bogga ayaa jecel inay isticmaalaan .htaccess si ay u xakameyaan spam gudbinta ee saamaynaya waxqabadka ganacsigooda internetka. Xayeysiinta gaaban ee aan ahayn kaliya ee dhageysataa waxay ka reebaysaa spam gudbinta iyo shabakadaha internetka ee GA-gaaga laakiin waxay sidoo kale ka hortageysaa ficilada xaasidnimada ah ee ka imaanaya server-kooda
Inaad isticmaasho nooca saxda ah marka laga reebo lagana hor istaago spam gudbinta loo doodo si looga fogaado inaad lumiso macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan boggaaga internetka Ma ogtahay in laba jibbaaranaha xarfaha marka la fulinayo amar goos goos ah Ganacsiga B2B? Ka hor intaadan xakamaynin spam gudbinta adoo isticmaalaya amar qoraal ah, tixgeli inaad la tashatid website-yo horumariye ama soo dejiya WordPress.
Su'aalaha qaar ayaa soo kordhay oo raadinaya caddaynta farqiga u dhexeeya robotyada iyo faylka faylka .htaccess. Sida laga soo xigtay designers website , faylka robots wuxuu ka shaqeeyaa caawinta raadinta raadiyaha iyo shabakadaha websaydhka si loogu wado gaadiidka websaydh halkaas oo ah .htaccess waxay ka caawisaa suuqyadda internetka si ay u dejiyaan amarro farabadan oo lagu xakameynayo spam gudbinta, noocyo IP ah, iyo gaadiidka been abuurka ah
Qaadashada shaashadaha GA ee spam gudbinta
Marka ay timaado in la xakameeyo spam gudbinta ee xisaabta Google Analytics, falanqaha Google Analytics ayaa lagu talinayaa. Saamaynta GA waxay u oggolaanayaan suuqyadda internetka iyo kuwa horumarinta webka inay falanqeeyaan xogta iyo warbixinnada Google Analytics. Sida badeeco, waxaad isticmaali kartaa GA si aad uga fogaato gaadiidka gudaha ee laga soo bilaabo goobta shaqada, spam u gudbinta gudbinta, iyo inaad ka saartid dhowr cinwaannada IP-yada iyo ciqaabta xun ee laga soo galo boggaaga.
Waxaad isticmaali kartaa falanqaynta Google Analytics si aad uga fogaatid domains xun iyo darodar ah goobtaada. Waa kuwan dhowr farsamooyin ah oo ay ku aaddan yihiin.
Ka bilow xisaabtaada GA oo geli.
Riix 'icon Settings' icon oo dooro 'Dhammaan Filters'
Abuur shey cusub oo soo saar magac cusub oo aad si fudud u xasuusan kartid.
Riix 'Noocyada Falanqaynta' 'oo aad doorato nooca' Foomamka Fadlan ah '
Ku dhufo oo ku dhufo 'Ka-reeb', '' IP-yada 'iyo' siman '' ee sanduuqyada lagu siiyay xisaabta Google Analytics.
Buuxi cinwaannada IP-yada in laga saaro, guji 'Save.'
Marka laga reebo cinwaanada IP iyo xawaaraha gudbinta ee koontadaada Google Analytics, waxaa lagugula talinayaa in la ogaado in feylayaashu aanay ka shaqeynin warbixinnadii hore. Si loo gaaro natiijooyin waara oo hufan, tixgeli inaad joojiso adeeyada spamka adoo isticmaalaya Google Analytics iyo faylka .htaccess. Ha sugin ilaa iyo inta ay kudhacdo spammy in aad dhaafto serverkaaga. Ku rakib Google Analytics shabakadaada internetka iyo xayiraadda spam, bogaga internetka, gaadiidka baaskiilka, iyo taraafigga gudaha